Rita, Writing for My Sake!: Rudyard Kipling ရဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်
Posted by Rita at 10/25/2009 03:35:00 PM
Love this poem. Thanks for posting! I don't know why but I personally like the THIRD paragraph the most.
I absorbed all.
စာသားတချို့ကို သီချင်းထဲမှာ နားထောင်ဖူးတယ်
mfg ဆိုတဲ့ myanmar future generation အဖွဲ့ဆိုတဲ့ သီချင်းထဲမှာ နားထောင်မိတာ။
ကြိုက်ချင်းတော့ တူနေတယ်၊ ဒါပေမယ့် စွဲလန်းမမှု သံယောဇဉ်ဆိုတာက လူက လုပ်ယူလို့ ဖြစ်လာတာ မဟုတ်ပဲ အလိုလို ဖြစ်လာတာက ခက်တယ် မဟုတ်လား။
ဒီကဗျာလေးကို ၈၉ ခုနှစ်ကတောင် စပြီး ရင်းနှီးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မေ့သွားလို့ ပြန်ကူးသွားတယ်နော့်။ အခုလို တင်ပြပေးတာ ကျေးဇူးပါပဲ။ ဒီကဗျာကို အစ်မလည်း သိပ်ကြိုက်လို့ နောက်ပိုင်း အစ်မဘလော့ဂ်မှာ ပြန်တင်ချင် တင်ဖြစ်မလားမသိဘူး။
10 တန်းတုံးက အင်္ဂလိပ်ကဗျာစာအုပ်မှာ ဒီကဗျာပြဌာန်းတယ်။